I-Offshore Inkampani Yokufundisa Izinhlobo, Izinzuzo, Izindleko Zokuhlanganiswa
Izinkambiso zeNkampani Yase-Offshore Ephakanyisiwe
Okulandelayo yizinkampanini zenkampani ye-offshore ezinikeza inhlanganisela yokuvikelwa kwempahla, ukuvikelwa kwecala kanye nokuyimfihlo. Ungabona futhi ishadi lokufanisa Ama-LLCs ase-offshore ngokuchofoza lesi sixhumanisi.
I-Nevis - Ubumfihlo, Ukuthula nokuzinza. Funda ukuthi kungani isiqhingi saseNevvis singenye yezindawo ezithandwa kakhulu namuhla. Ngaphezu kwakho konke, hlola ithuluzi elinamandla kunabo bonke: the Nevis LLC.
Belize - Izinkampani, IBC (International Business Company) kanye neBhange. Ngaphezu kwalokho, uzobona ukuthi iBelize inikeza izinketho ezihlukahlukene zokufaka ama-offshore. Isibonelo, i I-Belize LDC, I-Belize eyahlukile ku-LLC inikeza izinzuzo ezihlukile zokuvikelwa kwempahla.
Bahamas - Ukukhokha intela, Ubumfihlo kanye Nezindleko Eziphansi. Ngaphezu kwalokho, ungafunda mayelana nezinhlobonhlobo zezinketho ezitholakalayo kuwe eBahamas.
British Virgin Islands - Ukuphepha Okukhulu, Ukuvikelwa Kwempahla Nobumfihlo. Ngaphezu kwalokho, ungacwaninga ukuthi izinkampani zasogwini kanye ne-IBC ku-BVI zisiza kanjani ukuvikela ingcebo yakho.
Chofoza lapha ukuze uthole uhlu oluphelele: ezinkampanini zezinkampani zasemaphandleni.
Inkampani ye-Offshore Information
Izinkampani zase-Offshore kukhona izinkampani ezinjengezinkampani noma izinkampani ezinqunyelwe ukukhokhelwa (LLCs) wafaka ngaphandle kwezwe lakho. Abantu ababandakanya izinkampani ezisemaphandleni benza kanjalo, phakathi kwezinye izinto, lapho benesithakazelo ekuvikelweni kwefa, ukukhuliswa kwebhizinisi kanye nobumfihlo bezezimali. Ngaphezu kwalokho, ulwazi olulandelayo lufingqa izizathu zokuthi kungani abantu bakha lezi zinhlangano:
Ukulondolozwa kwentela (kuye ngokuthi igunya lakho)
Imithetho Yebhizinisi Eguquguqukayo
Ukuchithwa Kwezimali Zomhlaba Wonke
Amakhamphani we-Offshore Formation Strategies
Lapha, uzobona uhlu lwamanye amazwe angaphandle amasu okuvikela izimpahla, izindleko kanye nezinzuzo zabo. Ngaphezu kwalokho, lesi sigaba sikhuluma ngezici ezibalulekile zokuhlelwa kwe-offshore, kufaka phakathi izinkampani, amabhange asezindaweni zasemaphandleni kanye nethemba, ukuthi zihlelwe kanjani nokuthi kungani. Okubaluleke nakakhulu, singakwazi ukusungula i-akhawunti yasebhange yebhizinisi yenkampani ngayinye oyisungula nge-service yethu. Ngaphezu kwalokho, ungakwazi funda ngakho amabhange ase-offshore lapha.
Okokuqala, izindawo eziningi ezisemaphandleni babe nezinhlelo ezingokomthetho ezizuzisa labo abafuna ukuvikelwa kwempahla kanye nobumfihlo bezezimali. Cabanga ngalokhu izinzuzo zokwakheka kwamabhizinisi ase-offshore kanye namaqiniso. Ngokuphawulekayo, i I-US ine-4.4% yabantu bomhlaba, kodwa i-70% yabameli bezwe kanye ne-96% yamacala omhlaba. Ngaphezu kwalokho, ngokungafani namanye amazwe emhlabeni, asinakho olahlekile okhokhela uhlelo lwezomthetho. Ngokuphambene nalokho, kwamanye amazwe umlahleki wecala kumele akhokhe kokubili imali yakhe yommeli kanye nabaphikisi bakhe. Ngenxa yalokho, imithetho yabo yenza izinsolo ezincane kakhulu.
I-Offshore Inkampani = I-Moat ne-Alligators
E-US uma uhilelekile enkantolo futhi uyinqobe, usesekho izindleko zakho zomthetho, ngakho-ke ulahlekelwa. Ngokwesinye isandla, Ukuxoshwa inkampani ye-offshore kunzima kakhulu. Isibonelo, ake sithi umphikisi wezomthetho wakhetha ukusola inkampani yakho yase-offshore. Kungase kudingeke ukuba athumele isibopho sokuthi icala lithunyelwe ebhodini lokubuyekeza. Bona, nabo, banquma ukuthi ngabe icala lingayenza yini enkantolo noma cha. Ngokuvamile, isibopho asikhokhwa imali. Ngenxa yalokho, abantu abaningi abafake amacala okuhlukumeza. Ngakho-ke, lokhu kungqimba oluqinile lokuvikelwa kwecala. Ngamanye amazwi, ngokusebenzisa ngokunembile imithetho esemthethweni yegunya elisemaphandleni wena unciphisa ngokuphawulekayo izimpikiswano zomuntu onixoshayo.
With i-Nevis LLC, isibonelo, ukulungiswa kwe-2015 yenza umbolekisi ukuthi athumele isibopho se-$ 100,000 ngaphambi kokuba bakwazi ukuletha isenzo sokuqoqa isahlulelo ngokumelene nelungu le nkampani. Abameli be-Nevis bathuthukisa izimiso ku-2018 enikeza izinkantolo ze-Nevis igunya lokubeka isibopho noma yiliphi inani. Imali esindiswe ngokugcina imali yakho ingaboni amehlo, ngakho-ke, ukuvimbela amacala, ukuvikela izimpahla zakho ezivela kumacala kanye nokwandisa ubumfihlo bezezimali yizinye zezizathu eziningi zokuhamba olwandle. Elinye igunya elihle le-LLCs yi-Cook Islands. Ngesinye isikhathi, ungafunda lesi sihloko ku- Nevis LLC vs Cook Islands LLC okufanisa lezi zinhlangano ezimbili.
Izinhlobo zezinkampani zase-Offshore
Esinye iphuzu eliyinhloko yilokho izinkampani zase-offshore zinikeza ubumfihlo obukhulu kakhulu bezezimali kunenkampani yasekhaya izinhlobo. Izibonelo zalokhu zihlanganisa izinkampani, izinkampani ezinomkhawulo ezinomkhawulo noma izinkampani zomhlaba jikelele (IBCs). Kunezinkampani eziningi ezisemaphandleni ezinemithetho enhle kakhulu e-US, Canada noma e-UK. Lezi ziphathimandla zincintisana nama clientele angamazwe angaphandle. Ngenxa yalokho, imithetho yabo thola ubumfihlo bunikazi, ubumfihlo kubaphathi nabaqondisi nokungaqapheli kwamanye amazwe izahlulelo.
Njengoba kungabonakala, izingqinamba zecala lokushaya umnikazi webhizinisi laseMelika liphakeme. Emva kwakho konke, abameli abaningi baphikisana nje ukuze basinde. Eqinisweni, abanye bangalokothi babone ngaphakathi enkantolo. Okusho ukuthi, basebenzisa uhlelo lwezomthetho ukucindezela abaholi bebhizinisi ukuba bahlale ezindaweni ezingafaneleki. Ungafunda kabanzi mayelana nokuthi inkampani yasolwandle ukufakwa kungasiza ngezidingo zakho zokuvikelwa ngu kubiza i-OffshoreCompany.com noma by ukuqedela ifomu kuleli khasi. Sakha izinkulungwane zezakhiwo zebhizinisi njalo ngonyaka, ukusiza izinkulungwane zabantu baseMelika ngezidingo zabo zokuvikela nokuyimfihlo futhi banikeze isiqondiso kuzo zonke izinkampani zasolwandle ukuhleleka.